PITA karama Fụọnụ Nkedo Machine, Plastic Machine, Na-ejuputa Machine - FAYGO
3 alaka ụlọ ọrụ
Otu bụ FAYGOBLOW nke chepụta ma na-eme igbu ịkpụzi igwe maka PITA, Pee wdg Nke abụọ ụlọ ọrụ bụ FAYGOPLAST, nke na-eme plastic extrusion machinery.Third factory bụ FAYGO RECYCLING, nke na-eme nnyocha ọhụrụ ...
karịrị 100+ mba
FAYGO UNION jikọtara ndị ahịa nke ihe karịrị mba 100 nke ọma, gụnyere UK, Spain, Germany, Norway, Switzerland, Italy, Turkey Russia wdg site na Europe, na America, Canada, Mexico, Brazil.
Gburugburu 26,650 m2
ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị na obodo Zhangjiagang, na-ekpuchi mpaghara nke mita 26,650. Ọ na-ewe ihe dị ka awa abụọ ịkwọ ụgbọala site na ọdụ ụgbọ elu mba SHANGHAI. Mmadụ Bịa na ileta anyị factory, Welcome ileta anyị factory ...
Igwe ndị anyị na-emepụta gụnyere: igwe na-agba ọsọ karama dị elu, igwe juputara, igwe ịkpụzi ọkpọ, eriri ọkpọkọ, akụrụngwa profaịlụ, osisi-plastic extrusion na mpempe akwụkwọ plastik yana ihe enyemaka ndị ọzọ metụtara ya.
"Goodbụ ezigbo mmadụ, na-eme ezigbo igwe"
Ga-enweta azịza ka mma na ọnụ ahịa dị mma maka azụmaahịa gị!
Ndị na-ere ahịa anyị bụ awa 24 n'ịntanetị ma nye ndị ahịa ọtụtụ azịza ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ozi ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị, biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị
Ikike nchọpụta na akwụkwọ
Faygo Plast nwere 13 mba nchọpụta Kemịkalụ, gụnyere 8 mepụtara Ikike nchọpụta Kemịkalụ. Anyị na-emeziwanye ngwaahịa anyị ma nye teknụzụ kachasị ọhụrụ maka ndị ahịa anyị. Ngwaahịa anyị nwere OA na asambodo ISO
Igwe anyị ga - eji ngwa eletrik mba dị iche iche. All igwe ga-anwale tupu Mbupu. Insurance mkpuchi dị na Faygo Plast.
Nkwupụta na nyocha dị mkpirikpi。 Video mkparịta ụka dị mkpirikpi na nyochaVidiyo dị mkpirikpi na nyocha Vidiyo obere okwu mmeju na nyocha
Ememme Chineke ， FAYGO ...
Ememe Emume Chineke abịala, FAYGOUNION haziri ndokwa ifuru maka chi nwanyị ndị ahụ. Na aha okooko osisi, chi nwanyị ndị China ga-aga ọnụ ifuru ọnụ. Achọrọ m ka unu niile nwee obi ụtọ ụbọchị Chukwu! Roses, platycodons, carnations, daisies, onye nkụzi na-ewebata ...
Chinaplas 2019 Ihe ngosi ndị ahịa
anyị nwere ụlọ ntu abụọ ebe a, otu bụ maka igwe eji agba karama PET na ọnụ ọgụgụ ụlọ ntu bụ 11.1 C01, anyị ga-eweta oghere 4 6500-7200BPH PET anyị ebe a (ụdị igwe a na atụmatụ ndị a dịka: 1. Ọsọ ọsọ; 2. Energy ịzọpụta, dị nnọọ mkpa 22kw ọrụ ike; 3. Easy ...
Agbazekwa blown ákwà extrusion ...
Agbaze fụọ akwa extrusion igwe - A Dị Mkpa Myọcha na masks Faygo Plast Company gbalịa kacha mma ọgụ COVID-19 Agbazekwa fụrụ akwa ákwà bụ isi ihe maka masks, ọ bụ nnọọ ike na-na ahịa na-adịbeghị anya. Faygo Plast mepụta elu àgwà gbazee fụọ akwa extrusion igwe ...
Single Wall corrugated Pipe Line, Pee / pp / ịkwanyere corrugated Pipe Production Line, Ugboro abụọ Wall corrugated Pipe Machine, Hdpe Ugboro abụọ Wall corrugated Pipe Production Line, Single Wall corrugated Pipe Machine, Hdpe corrugated Pipe Extrusion Line,